Baiboly pejy 14 - Ny Baiboly
Voalohany < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Manaraka Farany
Jenezy toko 24 (tohiny)
60Nitso-drano an-dRebekà izy, ka nanao taminy hoe: Ho tonga alinalina anie hianao, ranabavy! Ary hahazo ny vavahadin'ny fahavalony anie ny taranakao! 61Dia niainga Rebekà sy ny ankizivaviny nitaingina teo ambony rameva, niaraka tamin-dralehilahy; ka roso ny dian'ity mpanompo, nitondra an-dRebekà.
62Tamin'izany Isaaka tonga avy any amin'ny fantsakan'i Kaï-Roy ka nonina teo amin'ny tany Atsimo. 63Indray hariva, raha ilay nivoaka mba hieritreritra tany an-tsaha iny izy, ka nanopy ny masony, dia indreny misy rameva tamy. 64Rebekà koa nanopy ny masony ka nahatazana an'Isaaka, dia nitsambikina niala teny amin'ny rameva; 65ary nanao tamin'ilay mpanompo hoe: Iza iry lehilahy eny an-tsaha tamy hitsena antsika iry? Dia hoy ilay mpanompo: Ny tompoko iny. 66Koa noraisin-dRebekà ny voaliny, dia nisaronany. Nambaran'ity mpanompo tamin'Isaaka avokoa ny zavatra rehetra nataony. 67Dia nampandrosoin'Isaaka Rebekà ho ao an-dain'i Sara reniny, sady nampakariny ho vady. Ary tia azy izy, ka nionona ny alahelony an-dreniny.
29Nahandro hanina indrindra Jakoba no tonga avy any an-tsaha Esao, efa trotraky ny harerahana. 30Ka hoy Esao tamin'i Jakoba: Mba avelao aho hihinana amin'ny mena, dia amin'io mena io, fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anaran'i Esao hoe Edoma. 31Ary hoy Jakoba: Amidio amiko àry aloha ny fizokianao. 32Dia hoy Esao: Izaho aza efa ho faty, ka ho inoko akory izay fizokiana? 33Fa hoy Jakoba: Mianiàna àry amiko aloha. Dia nianiana izy, ka nivarotra ny fizokiany tamin'i Jakoba. 34Izay vao nomen'i Jakoba mofo sy sosam-boanemba Esao; ka nony efa nihinana sy nisotro izy, dia nitsangana ka lasa nandeha. Toy izany no nanamavoan'i Esao ny fizokiany.
7Nanontanian'ny olona tompon-tany ny amin'ny vadiny izy, ka namaly hoe: Anabaviko io, satria natahotra ny hilaza hoe vadiko izy; fandrao vonoin'ny olona noho ny amin-dRebekà aho, hoy izy, fa tsara tarehy izy. 8Nony ela no nitoerany tao Jerara, sendra nitazana teo am-baravarankely kosa Abimeleka, mpanjakan'ny Filistina. Ka indro Isaaka hitany nisangy tamin-dRebekà vadiny.
Pejy: Voalohany < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2769 seconds